Ahoana no nahatonga an'i Eswatini ho lasa Toeran'ny fizahantany azo antoka kokoa?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Eswatini Travel News » Ahoana no nahatonga an'i Eswatini ho lasa Toeran'ny fizahantany azo antoka kokoa?
Novambra 15, 2020
Androany ny Manampahefana momba ny fizahan-tany any Eswatini dia nomena ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka by Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN)
Ny Tombo-kase dia miorina amin'ny WTTC Safe Travel Stamp natolotra an'i Eswatini sy ny fanombantombanana ny tena.
Nilaza ny tale jeneralin'ny ETA avonavona, Linda Nxumalo eTurboNews:
Ny Eswatini Tourism Authority (ETA) dia niara-niasa tamin'ny WHO sy ny ONU ary koa ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny indostrian'ny fizahantany mba hametraka karazana protokol sy torolàlana momba ny fahasalamana sy fiarovana izay arahin'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena ankehitriny. Notohanan'ny OMS sy ny Firenena Mikambana, napetraka ireo protokolô ireo mba hiantohana fa afaka mivezivezy arak'izay azo atao ny mpitsidika rehetra ao amin'ny firenena ary atahorana indrindra avy amin'ny COVID-19. Ho fankatoavana ireo kaonty ireo, dia i Eswatini no firenena feno voalohany tany atsimon'i Afrika izay nahazo ny fankatoavana WTTC Safe Travels Stamp ary izao dia esorin'ny ETA izany Stamp manerana ny indostria ao Eswatini. Nasehon'ny ETA fa tena matotra tokoa izy io amin'ny fiarovana ny mpizahatany ary efa nandray ny dingana rehetra azo atao mba hahazoana antoka fa azo tsidihina sy ankafizina araka izay azo atao i Eswatini.
Ny Seal Tourism Seal ”(STS) dia manome toky fanampiny rehefa mandeha mandritra ireo fotoana tsy azo antoka ireo.
Ny tombo-kase STS dia manangana ny fahatokisan'ny mpandeha ny toerana itodiana ary lasa marika fantatry ny olona eran'izao tontolo izao mandritra izao fotoan-tsarotra izao. Ny fiarovana ny dia dia miankina amin'ny mpamatsy sy ny mpandray ny fanekena izany zava-misy izany.
Ny mpihazona tombo-kase dia maneho ny tsara indrindra amin'ny dia ary mampiseho amin'izao tontolo izao, fa ny fitsangatsanganana azo antoka dia andraikitry ny tsirairay.
Na dia firenena kely miambina amoron-tsiraka any amin'ny hemisphere atsimo aza izy, ary firenena faharoa kely indrindra ao amin'ny kaontinanta afrikanina, Eswatini, Swaziland fantatra taloha, mihoatra ny fanonerana ny tsy fahampian'ny habeny miaraka amina karazana fisarihana sy hetsika maro karazana.
Amin'ny maha-mpanjaka monja sisa tavela any Afrika, ny kolontsaina sy ny vakoka dia voahidy mafy amin'ny lafin'ny fiainana Swazi rehetra, manome antoka ny traikefa tsy hay hadinoina ho an'izay rehetra mitsidika. Ary koa ny manankarena kolontsaina, ny fisakaizan'ny olona manjaka dia mahatonga ny mpitsidika rehetra hahatsapa fa tena tongasoa sy azo antoka tokoa. Manampy an'io manaitra io toerana manodidina ny tendrombohitra sy lohasaha, ala sy lemaka; miampy biby tahiry manerana ny firenena izay onenan'i The Big Five; ary fifangaroana mahaliana amin'ny fety maoderina sy nentim-paharazana, lanonana ary zava-mitranga, ary manana ny tsara indrindra momba an'i Afrika ianao ao amin'ny firenena kely iray nefa miforona sy mandray tsara.
Ny Safer Tourism Sea dia fandraisana andraikitra avy amin'ny World Tourism Network: www.tv.travel
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny programa Safer Tourism Seal: www.fioritourismseal.com
Misimisy kokoa momba ny Fahefana fizahan-tany any Eswatini: www.tatabesrivite.com
Hyatt Resort voasokajy no toerana azo antoka farany hanaovana vakansy
Tsy nanararaotra nanidina i Flybe